झापामा बन्यो यती राम्रो कार, मूल्य सुन्दा बिस्व चकित, हेर्नुस यी युवाको क्षमता, अब हवाइजहाज बनाउदै (भिडियो) सम्मान स्वरुप १ सियर गरौ । - Nepal Times Online
झापाका एक युवाले काठको कार बनाएका छन् ।
शिवराज लिम्बु नाम गरेका यि युवालाई गाउँलेहरुले बैज्ञानिक भनेर चिन्छन् । उनको यो कामलाई प्रोत्साहन गर्नका लागी हामीले यो भिडियो हजुरहरु सामु ल्याएका छौ । गरिब परिवारमा जन्मिएका शिवराज अहिले झापा छन् । उनको यो क्षमतालाइ अझ माथि पुराएर यो देशको नाम विश्व सामु चिनाउन हामि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ।
सानो उमेर देखि नया कुराहरु सिक्ने र बनाउने उनको स्वभाभ रहेछ । स्थानीय, गाउँले र नगरपालिकाले साथ दिएको छ । उनले अहिले काठको कार बनाएर सबैलाई चकित बनाएका छन्भ भने अब हेलिकप्टर बनाउने योजनामा छन् । उनलाई आर्थिक रुपमा पनि धेरै समस्या परेको हुदा आर्थिक सहयोग गर्न कृपया सबैले यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै सेयर गर्दिनुहोला ।
पुरा भिडियो हेर्नुहोला ।
भिडियो हेर्नको लागी यहा क्लिक गर्नुहोला ।
रमेश प्रसाई र कल्पना दाहालको विश्वभरी बिहेको चर्चा चल्दा दोहोरीबाटै खोले बिहेको रहस्य भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोला ।
कास्कीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ ।
योगेश भट्टराईको गम्भीर इशाराः राजावादीको हितमा ओलीका कदम। अब के हुन्छ ? (भिडियो )
श्रीमद्भागवत गीताहिन्दू धर्मका पवित्रतम ग्रन्थ र अध्याय-१ ।
Posted on April 12, 2021 April 12, 2021 Author USER-1
यस्ता घटना अब नदोहोरिउन चार वर्षमा १७ जनाको ब’लात्कारपछि ह’त्या
‘पार्टीले हटाइसकेका ओलीलाई किन ‘अध्यक्ष’ भनेको ?’ : आयोगलाई प्रचण्ड–माधवको प्रश्न
घर नै गोरु का’ट्ने र काट्न संग्लन सहित ४ पक्राउ ।
लाहुरे र स्मिताको भित्री रहस्य, पुनर्मिलन झुट कि बास्तबिकता ? (भिडियो)